यूएईमा कोरोना : नेपाली भन्छन्,अब दूतावासकै गेटमा सुत्छौं – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/यूएईमा कोरोना : नेपाली भन्छन्,अब दूतावासकै गेटमा सुत्छौं
यूएईमा कोरोना : नेपाली भन्छन्,अब दूतावासकै गेटमा सुत्छौं
1,0292minutes read
यूएई – कोरोनाको जोखिम बढेसँगै अहिले परदेशमा रहेका धेरै नेपालीका समस्या थपिएका छन् । कसैको भिसा सकिएको छ त कतिपय टिकट काटेर पनि घर फर्कन नपाउँदा परदेशमै समस्यामा परेका छन् । अझ म्यानपावरको झुट र कम्पनीको बदमासीले समस्यामा परेकालाई त झनै मार परेको छ । एकतिर कोरोनाको डर, अर्कातिर खान बस्नकै समस्या । ओशो म्यानपावरमार्फत यूएई पुगेका इलामका रमेश बुढाथोकी पनि यस्तै भुमरीमा पर्नुभएको छ ।
रमेशको भोगाई उहाँकै शब्दमा
मेरो नाम रमेश बुढाथोकी हो । घर इलाम । अहिले यूएईको सारजहामा छु । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा १६ वर्ष कतारमा बिताएर नेपालमै केही गर्छु भनेर व्यवसाय पनि थालेको मान्छे हुँ ।
तर नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा म सफल हुन सकिनँ । उल्टो घाटा भयो । त्यही घाटाको परिपूर्ति गर्ने एउटा मात्र विकल्प भनेको वैदेशिक रोजगारी मात्र थियो । स्नातकसम्म पढेको छु ।
केही गर्न पनि खोजेको हुँ आफ्नै ठाउँमा । तर नेताको आफन्त या कार्यकर्ता परिएन । एक्लै लड्न सकिएन, व्यवसायमा घाटा लाग्यो । काठमाण्डौ गएँ । म्यानपावरमा कुरा गरें । ओशो म्यानपावरले सारजहाको ट्याक्सी कम्पनी इमिरेट्स क्याबमा पठाइदियो । मसहित अरु झण्डै ६० जना आयौं, तर यहाँ पनि नेपालमा म्यानपावरले भनेजस्तो केही पनि भएन ।
नेपाल जाने भनेर केस गरियो । केस चल्दै गयो । आफ्नै रुम, आफ्नै खाना, कमाइ छैन । काम छोडेर केस गरेर बसेका हामी दिनानुदिन समस्यामा फस्दै गयौं । यहाँ दुःखमा फसेको पनि ७ महिना भयो । तर समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
दूतावास पनि गयौं पटक पटक । दूतावासको पहलले भिसा क्यान्सिल हुन सुरु भयो । हाम्रा १५ जना साथीको क्यान्सिल भयो । उहाँहरु नेपाल जानुभयो । दुर्भाग्य हाम्रो क्यान्सिल सँगसँगै नेपालको विमानस्थल पनि बन्द भयो ।
हामी ४० जना कोरोनाको चपेटामा परियो । एउटै रुममा खान बस्न, निकै समस्या छ ।
कहिले फलैँचा, कहिले पार्कमा सुत्दै रात काटियो । केही समयपछि एनआरएनएको सहयोगले बेडस्पेसमा बस्न थालियो । उहाँहरुले नै खानाको प्रबन्ध गरिदिनुभएको छ । तर यहाँ रमदान सुरु भयो । हामी बस्ने रुम भारतीय र पाकिस्तानीहरुको सँगै पर्छ । १२ जनाको दरले अब यहाँ कोठाबाट पनि निकाल्दैछ ।
अब सरकारले कस्तालाई उद्धार गर्ने हो ? के मन्त्री नेताको आफन्तको लागि मात्र जहाज आउने हो कि हामी पनि नेपाली नै हो ? पर्सिदेखि हामी नेपाली दूतावासमा झोला लिएरै जाँदैछौं । बस्न दिन्छन् कि दिँदैनन् थाहा छैन । नदिए गेटमै सुत्नेछौं । हामी मृत्युको मुखमा छौं । हामीलाई बचाउ सरकार ।
थप ३० जनामा देखियाे काेराेना
कोरोनाबाट मृ’त्यु भएकी महिलाको शिशुलाई मन्त्री बस्नेतले गरे १ लाख सहयोग
Feel the earthquake in Bajhang
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ६ वर्षकी बालिकाले जितिन् कोरोना
मायाकी खानी प्यारी आमाको लागि १४ प्रेरक भनाईहरु